बम टिपेर फाल्नेलाई धन्यवाद:हान्नेलाई चाहिं कारवाही ख्यै? | Citizen Post News
भारतीय चलचित्रसंग तुलना गर्दै सामाजिक सञ्जालभर प्रहरी हवल्दार दुर्गाबहादुर रानाको गुनगान गाईयो । कारण–सहि थियो । उनको शाहसको तारिफ गर्दै बधाई तथा शुभकामना दिनु स्वभाविक पनि हो । किनकी उनले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी अज्ञात समूहले मतदान केन्द्रमा फालेको बम टिपेर बाहिर फाल्ने जुन साहस देखाएका थिए । उक्त घटना भएको थियो–तुलसीपुर नगरपालिका वडा नं ३ को आम्वासस्थित मतदान केन्द्रमा । त्यहां अज्ञात समूहले बम फालेपछि नेपाल प्रहरीका हवल्दार दुर्गाबहादुरले उक्त बम केही सेकेन्डमै जहांबाट आएको हो त्यहीँ फालेर मतदानमा खटिएका कर्मचारी र मतदातालाई बचाएका थिए । उनले पनि सानस“गै विभिन्न सञ्चारमाध्याममा भने–‘मैले झटपट बम टिपेर जताबाट आएको हो त्यही फ्याकी दिए, अनि ठूलो आवाजले पड्कियो ।’ उक्त घटना बिहान करिब ९ः३० बजेको हो । मतदान केन्द्रलाई लक्षितगरी उत्तरतर्फबाट बम प्रहार भएको थियो । उनलाई क्षति हुनबाट सवैलाई बचाएकोमा गर्व लाग्नु पनि स्वभाविक हो ।
अज्ञात समूह भनेको को हो ? किन त्यो समूहमाथि अनुसन्धान गरेर २४ घण्टाभित्र कारवाही गर्ने आदेश गृहमन्त्री शर्माले दिएनन् ? जनता कति भिडको पछाडि मात्र लाग्ने हो ? कहिलेकही विवेक पनि त लगाउनस पर्छ नि । त्यसको जवाफ गृहमन्त्रीले आमनागरिकलाई दिनुपर्छ । राजनीतिमा कहिलेकही दोषीलाई उम्काउन ‘स्टण्ड पब्लिसिटी’ गरिन्छ, ताकी घटनाले अर्कै मोड लियोस् । कतै त्यस्तो षड्यन्त्र त होइन गृहमन्त्री ज्यू ? मेरो तपाईलाई प्रश्न छ ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रहरीका उच्च अधिकारीले साहसिक काम गरेको भन्दै हवल्दार दुर्गाबहादुरलाई टेलिफोन गरेरै धन्यवाद दिए, खुसिले उनी गदगद भए । गृहमन्त्री शर्माले उनलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा पनि गरे, त्यो पनि जायज नै हो । तर, दोस्रो चरण अन्तर्गतको निर्वाचन भाड्ने अभियानमा लागेको तथा बम आतंक मच्चाउने नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ लाई किन माओवादीले बचाइरहेको छ ? उनको समूहको बम आतंकबारे जानकारी मिल्दा पनि कारवाही गर्नबाट गृहमन्त्री किन चुकिरहेका छन् ? ‘राम्रो काम गर्नेलाई स्यावासी दिइन्छ भने नराम्रो काम गर्नेलाई चाहिं कारवाही गरिन्न ? नराम्रो काम गर्नेलाई चाहिं कारवाही गरिन्न भने यसको मतलब आतंक कायम राख्नु भने सरह हो ।’–आमनागरिकको आलोचनात्मक विचार यस्तै पाएको छु मैले । अज्ञात समूह भनेको को हो ? किन त्यो समूहमाथि अनुसन्धान गरेर २४ घण्टाभित्र कारवाही गर्ने आदेश गृहमन्त्री शर्माले दिएनन् ? जनता कति भिडको पछाडि मात्र लाग्ने हो ? कहिलेकही विवेक पनि त लगाउनस पर्छ नि । त्यसको जवाफ गृहमन्त्रीले आमनागरिकलाई दिनुपर्छ । राजनीतिमा कहिलेकही दोषीलाई उम्काउन ‘स्टण्ड पब्लिसिटी’ गरिन्छ, ताकी घटनाले अर्कै मोड लियोस् । कतै त्यस्तो षड्यन्त्र त होइन गृहमन्त्री ज्यू ? मेरो तपाईलाई प्रश्न छ ।